Ejypta: Ahoana no ahafahantsika manampy an’i Gaza? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Janoary 2019 8:39 GMT
Manao hetsika ireo bilaogera Ejiptiana ho fanohanana an'i Gaza izay iharan'ny fanafihan'ny tafika Israeliana nandritra ny herinandro.
Yasmin manontany hoe: Inona no azontsika atao ho an'i Gaza?
Manamarika ny fomba ahafahantsika tena manampy izy fa tsy hiraviravy tanana fotsiny, ary mibilaogy hetsika vitsivitsy sy miabo amin'ny bilaogy. Afaka manomboka miasa amin'izany ireo bilaogera Ejiptiana. Izao avy:
* Raha bilaogera ianao, dia manorata bilaogy momba izany. Mbà tony sy mahay mandanjalanja, mamaly amim-pahendrena sy amim-paranintan-tsaina ireo fanehoan-kevitra feno fankahalana.
* Raha mampiasa Twitter ianao, dia mandefasa sioka momba izany.
* Raha monina any amin'ny firenena izay ahafahanao manova ny fihetsiketsehana ara-politika ary mandresy lahatra ho an'ny fiarovana an'i Gaza.
* Raha mampiasa Facebook ianao dia mandefasa hafatra sy lahatsoratra bilaogy mba hampafantatra ireo namanao tsy Arabo momba ny vaovao marina.
* Raha mpanao sariitatra ianao na mpanakanto, asehoy ny hevitrao ary alefaso ao amin'ny deviantart, facebook, bilaogy na izay rehetra mety aminao.
* Raha mpampianatra ianao, dia ampianaro ireo zandrintsika tanora.
* Raha anisan'ny Global Voices ianao dia mandikà lahatsoratra ary ampahafantaro izao tontolo izao.
Tamin'ny fanamarihana miabo mitovitovy amin'izany, nanomboka hetsika vaovao hanohanana an'i Palestina i Appy sy Mfawey. Mitaky amin'ny mpamakiny izy ireo mba handefa mailaka any amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena rehetra mba hanehoana ny tena zava-misy momba ny fepetra maha-olona mahatsiravina ao Gaza noho ny fanafihana feno herisetra ataon'ny ny Israeliana sy ny fiantraikany eo amin'ny mponina sivily. Miantso ireo mpandika teny an-tsitrapo ihany koa izy ireo mba handika ny lahatsoratra amin'ny fiteny rehetra.
Toy izao manaraka izao ny hafatra nalefa tamin'ny bilaogy roa tonta:
Ny andro fahenina, nanohy ny vono olona nataon'izy ireo tamin'ny vahoakan'i Gaza i Israely. Teo amin'ny 440 no maty sy maritiora ary mihoatra ny 1750 no naratra noho ny fanohanan'ny fanjakana amerikana, ny tsy fihetsehan'ny fiarahamonina Arabo sy ny fiarahamonina iraisam-pirenena izay manameloka am-bava fotsiny ny herisetra tsy ara-drariny nihatra tamin'ny vahoaka Palestiniana. Fiampangana am-bava fotsiny ny herisetra tsy ara-drariny nihatra tamin'ny vahoaka Palestiniana izany.
Arabo, Miozolomana ary Eoropeana no nidina an-dalambe mba hanao fihetsiketsehana sy haneho ny hatezerany manoloana ny tsy fanajana ny maha-olona iaretan'ny mponina ao Gaza izay iharan'ny hanoanana, ny fanitsakitsahana ary ny fandikana ny fitsipika rehetra momba ny zon'olombelona. Ity herisetra ity dia tsy mihatra amin'ny Hamas ihany araka izay nambaran'ny fampahalalam-baovao Isiraeliana, fa mahazo ihany koa ny moskea, ny oniversite silamo, trano sy sekoly iray miankina amin'ny fanavotan'ny Firenena Mikambana ho an'ireo Palestiniana mpitsoa-ponenana (UNRWA) sy ny tranoben'ny governemanta Palestiniana ao Gaza; faritra be mponina indrindra nitombo isan'ireo sivily niharam-boina eran'izao tontolo izao. Omaly dia nanambara ny tafika Israeliana fa lasa faritra ara-tafika i Gaza ary miantehitra tamin'ny tafika fanampiny maro sy fiara mifono vy mba hiomana amin'ny fananiham-bohitra ara-miaramila vaovao any Gaza.
Fanampin'izany, nanafika ny sambo ”Dignity ” izay tonga avy any Sipra ary nikasa ny handrava ny fahirano ao Gaza ny tafika mitam-piadiana tsara aro israeliana. Mangataka anareo izahay mba hanampy an'i Gaza haingana araka izay tratra sy hanakana avy hatrany ny famonoana ataon'ny Israeliana ny vahoaka Palestiniana tsy manana fitaovam-piadiana ary hamarana ny fahirano ao Gaza, sy hanokatra ny lalana fiampitàna (sisintany) ao Rafah. Tsy mety manokatra ny lalana fiampitàna ny manampahefana Ejiptiana raha tsy eo ny manampahefana Palestiniana, sy ny fisian'ireo mpanaramaso iraisampirenena, ary noho ny tahotra daroka an'habakabaka ataon'ny Israeliana eo amin'ny sisintany ao Rafah iantohana ny fitaterana ireo Palestiniana naratra any amin'ny hopitaly any Ejipta noho ny tsy fahampian'ny fitaovana fitsaboana ilaina ao Gaza.
Amin'ny anaran'ny maha-olombelona sy ny zon'olombelona, ​​mangataka aminao izahay mba hamonjy an'i Gaza amin'ny loza mitatao manoloana ny famonoana olona ataon'ny tafika Israeliana.
Tahyyes manoratra momba ireo fitaovam-pitsaboana ilaina ao Gaza, ho fanomanana ny fandefasana fanafody fanavotana any Palestina. Ny lahatsoratra dia ahitana lisitra feno amin'ireo fitaovam-pitsaboana ilaina hitsaboana ireo sivily izay naratra nandritra ny herinandro teo aloha.
Ho ahy manokana, nangataka tamin'ny mpamakiko aho, alohan'ny zavatra rehetra, mba hahafantatra ny fomba fisainan'ny Israeliana amin'ny famakiana ny bilaogin'izy ireo:
Raha vonona handresy amin'ny raharaha ny Arabo .. dia FANTARO ALOHA NY FAHAVALONAO!
Vakio ny blaogin'ny Israeliana ary fantaro ny laingan'izy ireo .. tsy asa sarotra izany, na dia izany aza.